Izindaba - Imboni Yedivayisi Yezokwelapha I-Outlook Y2021- Y2025
Isiteshi esisodwa seTransducer
Ukusetshenziswa Kokufanekisa Ngezokwelapha
OkweBayer / Medrad
Imboni yamadivayisi wezokwelapha yaseChina ibilokhu iyinhlangano ehamba ngokushesha futhi manje ibalwa njengemakethe yesibili ngobukhulu yezokunakekelwa kwempilo emhlabeni. Isizathu sokukhula okusheshayo kungenxa yokuthi imali esetshenziswayo yezempilo iyanda kumadivayisi ezokwelapha, ezemithi, izibhedlela kanye nomshuwalense wezempilo. Ngaphandle kwalokho, abadlali abaningi be-domesitic bagxumela emakethe futhi abadlali abavelele baguqula ngokushesha ubuchwepheshe obukhona nokuqhamuka nemikhiqizo emisha.
Ngenxa yeCovid-19, iChina isenkathini yokuthuthuka okusheshayo kwemikhiqizo yedivayisi yezokwelapha ehlose ukuthola uphawu lwangaphambili. Ngasikhathi sinye, kwethulwa imikhiqizo emisha kanye nobuchwepheshe obusha bezokwelapha emakethe eqhuba intuthuko esheshayo yomkhakha wedivayisi yezokwelapha, ikakhulukazi ukukhula okusheshayo kwezinkampani ezihola emkhakheni ngamunye.
Eminyakeni yamuva nje, iChina lingene esikhathini sokuthuthukiswa kokuthuthukiswa komkhiqizo nobuchwepheshe, njenge-stent ebolayo eqalwe yi-Lepu Medical, iphayiphi le-IVD elasungulwa yi-Antu Biotech neMindray Medical, kanye ne-endoscopy ekhiqizwa futhi yathengiswa yiNanwei Medical. Imikhiqizo ye-ultrasound esezingeni eliphezulu ekhiqizwe yiMindray Medical neKaili Medical, kanye nemishini emikhulu yezithombe ze-United Imaging Medical inamandla okulungisa imikhiqizo ephakathi nendawo ephezulu engenisiwe engenisiwe emikhakheni yabo, ngaleyo ndlela yakha amandla aphakathi emisha kanye nokwenza ngcono imishini yezokwelapha yaseChina. .
Ngo-2019, izinkampani ezibalwe ngosizo lwezokwelapha lwaseChina zinegebe elikhulu lemali engenayo. Izinkampani ezibalwe phezulu ezingama-20 ezinemali engenayo ephezulu yiMindray Medical, ngemali engenayo efinyelela ku-16.556 billion, kanti inkampani enenani eliphansi kunazo zonke iZhende Medical, enemali ezungeze u-1.865 billion yuan. Izinga lokukhula kwemali engenayo ye-The Top20 engenayo yezinkampani ezibalwe unyaka nonyaka ngokuvamile lisezingeni eliphakeme kakhulu. Izinkampani ezibhalisiwe eziphezulu ezingama-20 emalini engenayo zisatshalaliswa eShandong, eGuangdong naseZhejiang.
Inani labantu baseChina elikhulayo likhula ngokushesha kunanoma imaphi amanye amazwe emhlabeni. Ngabantu abaguga ngokushesha, ukwanda kokungena kokuthengiswayo okungasetshenziswa ngokuhlanganyela kukhuthaze ukukhula okusheshayo kwemakethe yezokwelapha elahlwayo.
Izinga lomdlavuza kanye nenhliziyo nemithambo yegazi liyaqhubeka nokukhuphuka futhi nokusetshenziswa kokuskena okuthuthukisiwe okuthembekile emtholampilo kuyaqhubeka nokukhula, okwanda ekusetshenzisweni kwezinto zokusebenzisa ze-radiography ezinengcindezi ephezulu. Izinga lamazinyo okuskena kulinganiselwa ukuthi lifinyelela ezigidini ezingama-194 ngo-2022 uma kuqhathaniswa nezigidi ezingama-63 ngo-2015.
Ukuxilongwa ngokunembile kudinga ukucaciseleka okuphezulu kwe-imaging nokunemba kobuchwepheshe be-imaging.
Enye inqubomgomo yedivayisi yezokwelapha i-industrial ry ikhathaza i-Article 35 ye- "Regulations on the Supervision and Administration of Medical Devices". Ibeka ukuthi amadivaysi ezokwelapha asebenzisa okukodwa ngeke asetshenziswe kaninginingi. Ukulahlwa kwezokwelapha okusetshenzisiwe kufanele kubhujiswe futhi kubhalwe phansi ngokuya ngemigomo.Ukuvinjelwa kokulahlwayo okusetshenziswayo kuvimbela ezinye izibhedlela ekusebenziseni kabusha ukusetshenziswa kwezinto ezinengcindezi ephezulu ukonga izindleko.Lokhu kugcina kudinge ukusetshenziswa kwezinto zokucabanga ezinengcindezi ephezulu
Ngokuya ngamathrendi angenhla, imboni yedivayisi yezokwelapha ingaphansi koshintsho olukhulu. Izinga lokukhula kwamakhompiyutha lonyaka cishe liyi-28%. I-Antmed iyona ehamba phambiliisirinji yomfutho ophakeme enza eChina futhi sitshala imali kakhulu kwinqubo ye-R & D. Sithemba ukufaka isandla embonini yezokwelapha yaseChina futhi sigcine isikhundla sethu somholi wemboni.
Isikhathi Iposi: Feb-26-2021
18 Jinhui Ave., iPingshan New District, Shenzhen, 518122, China